I-Solar leED Light System - i-Beijing Multifit Electrical Technoloty Co., Ltd.
I-Solar leED Light System
Ukuphila okufudumele kudinga ukukhanya, futhi ubusuku abuthuli. Khanyisa umgwaqo ngaphansi kwezinyawo zakho, khanyisa indlela yokuphila.
Isikhathi sibuqedile ubumnyama, abahamba ngezinyawo baye basheshisa ijubane labo, izibani zelanga zijabulela i-photosynthesis buthule, izibani zelanga zibheke ngabomvu ebusuku futhi zikulethela ukuphila okukhazimulayo.
Iphephile ukusebenzisa, ingenamanzi, ifaka ubufakazi bombani, i-dustproof, ivikela ngokuphumelelayo umzimba wesibani, yelula impilo yesevisi, i-self-powered, asikho isidingo samandla edolobha, kulula ukuyifaka.
Inzwa yokukhanya ehlakaniphile iyaqala, akukho msebenzi owenziwa ngesandla.Amaphaneli elanga adonsa ukukhanya kwelanga ukuze wonge ibhethri emini, futhi azikhanyise ngokuzenzakalelayo lapho indawo iba mnyama ebusuku.